China Inotakurika 12 Volt Ovhheni YeKubheka Mugadziri uye Mutengesi | Ndarama yegoridhe
Zvinhu: Stainless Simbi uye Washington City Offices
Saizi: 32 x 29 x 19 cm
Kurema: 8 makirogiramu
Rudzi rwemafuta: Magetsi
12 Volt Oven Tsananguro
Shamwari yako diki paunenge uchifamba, Iyo mini ovhiri yemagetsi inokuendesa iwe nyowani inopisa inopisa padivi pemugwagwa. Yakakura yekugadzira zvidiki zvidiki zvezvinhu zvakabikwa, zvekudya zvekudya zvekudya, piza, uye sandwiches inodziya, iyi kota saizi yekubika hovhoni inzira yakanaka yekuwedzera yekubika pasina kupa nzvimbo yakakosha mukicheni yako! Yakakura zvakakwana kuti ikubatsire kugadzirira chero kudya kana pati, ino yekubheka hovhoni yemagetsi ine yakazara-saizi ovhoni kuita mune compact, simba-inoshanda fomu. Iyo yakatsaurirwa pizza basa rinobika pizza kune kukwana mumaminetsi. Kubva zvakaenzana kugadzira chingwa kusvika pakubika chakakangwa nemhedzisiro yekumwisa.
Chitofu chemagetsi chinotakurika chakazara nenzira dzekubika dzakasiyana siyana dzinobva pakubheka makeke kusvika pakucheka makuki kusvika pakugocha salmoni yekugocha nyama kana nyama yenguruve. Iko hakuna kudikanwa kwekushandisa yakawedzera nguva kubika kwakasiyana kudya kweanotora iwo, chero. Iri diki remagetsi chitofu rakakwenenzverwa dhizaini rinoita kuti rive rakanakira mashopu ekofi, ma kiosks, zvidhakwa, uye maresitorendi, kunyangwe yekushandisa mota.
Uyezve, ovhiri rinotakurika remagetsi rakanakira chero munhu, chero kupi uye chero nguva. Ovhiri inotakurika yekubheka inogona kutsiva microwave muhofisi yako. Iyo mota yekukomberedza accessories inopa nyore yekubika kuwana yevakwegura, inoshanda seyakajairika kune vanogara mufurati kana kupa vanofarira zvekudya zvekudya nechidiki chakawedzerwa chinwiwa.
Yemukati Makuriro: (D) 254 x (W) 270 x (H) 99mm
Kunze Kwekunze: (L) 320 x (W) 290 x (H) 190mm
Max Oven Nguva: 1-120 Maminitsi
Inodzoserwa Fuse Chiyero: 15A
Insulation: Washington City Offices
Casing: Simbi Isimbi
12 Volt Oven Mifananidzo
Pashure: Camping Stove Huru Yemvura Tangi Inokodzera Chimbini
Zvadaro: Chimney Flashing Kit Yekupenya Tende
12 Volt Camp Ovhheni
12v Mota Ovhheni
Portable Magetsi hovhoni
Portable hovhoni For Bakin
Tende Wood Inopisa Chitofu, Camping Stove Mvura Tangi, Musasa Wood Burner, Bindu Kubika Chitofu, Kunze Kwehuni Kunopisa, Stainless simbi chitofu,